शिखरमा सुनको भाउ, यो साताभरि उछाल Bizshala -
शिखरमा सुनको भाउ, यो साताभरि उछाल
काठमाण्डौ। नेपाली बजारमा सुनको भाउ दिनदिनै बढ्दै प्रतितोला १ लाख रुपैयाँ नजिक पुगेको छ।
यो साता कारोबारको अन्तिम दिन पनि सुनको भाउ तोलामा ३०० रुपैयाँ बढेको छ। यो बढोत्तरीसँगै प्रतितोला फाइन गोल्ड ९९ हजार ३०० रुपैयाँ तेजाबी गोल्ड ९८ हजार ८६५ रुपैयाँ कायम भएको छ। यो मूल्य नेपाली बजारमा हालसम्मकै उच्च हो।
हिजो बिहीबार पनि सुनको भाउ तोलामै ५०० रुपैयाँ बढ्दै प्रतितोला फाइन गोल्ड ९९ हजार रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ९८ हजार ५६० रुपैयाँ कायम भएको थियो। गत बुधबार भने तोलामा ३०० रुपैयाँ बढेको थियो। यो दिन प्रतितोला फाइन गोल्ड ९८ हजार ५०० रुपैयाँ र तेजाबी गोल्ड ९८ हजार ६५ रुपैयाँ कायम भएको थियो।
यसैगरी गत मंगलबार सुनको भाउ तोलामै ७०० रुपैयाँ र सोमबार १ हजार २०० रुपैयाँ बढेको थियो। साताको पहिलो कारोबार दिन आइतबार सुनको भाउ तोलामा ५०० रुपैयाँ बढेको थियो।
समग्रमा यो साता सुनको भाउ तोलामै ३ हजार ५०० रुपैयाँ बढेको छ।
यता चाँदीको भाउ आज तोलामा २५ रुपैयाँ घट्दै १ हजार २०० रुपैयाँ कायम भएको छ।
सुन तोलाको रु. ९३ हजार नजिक
सुनको भाउ तोलामै ९०० रुपैयाँले उकालो लाग्यो, चाँदीमा पनि
काठमाण्डौ । नेपाली बजारमा सुनको भाउ आज आइतबार उकालो लागेको...
सुनको भाउ घट्यो, चाँदीमा गिरावट
काठमाण्डौ । साताको पाँचौँ कारोबार दिन बिहीबार सुनको भाउ ओरालो...
सुन तोलामा रु. ३०० ले सस्तियो, चाँदी स्थिर
लगातार बढ्दै सुनको भाउ, चाँदीमा गिरावट
काठमाण्डौ । यो साता लगातार तेस्रो दिन मंगलबार पनि सुनको भाउ उकालो...
सुन तोलाको रु. ९२ हजार पुग्यो, चाँदीको कति?
काठमाण्डौ । नेपाली बजारमा सुनको भाउ आज सोमबार तोलाको ९२ हजार...